Hutano - Prairie State Legal Services
MUNHU WESE ANODZIDZIRA KUWANIKWA KUNYANYA KWEZVANHU KUTARISIRA UYE RUSUNUNGUKO UYE KUITA ZVISARUDZO NEZVO Hutano
KuPrairie State Legal Services, isu tinobatsira vanhu uye mhuri kuwana nekuchengetedza Medicaid neMedicare uye kuwana kufukidzirwa kwehutano hwehutano hwavanoda.
Isu tinobatsira vanhu vakuru uye vanhu vakaremara kuwana rubatsiro runodiwa kuti vagare mumisha yavo kana kuchengetedzwa kwakachengeteka kwekuchengetwa kwenguva refu.
Isu tinopa simba vakwegura uye vanhu vakaremara kutora sarudzo yavo yezvehutano kuburikidza nemasimba egweta. Pazvinenge zvakakodzera, tinobatsira nhengo dzemhuri kuwana kuchengetwa kana chimwe chiremera chepamutemo chekuchengeta vadikanwa.
Tinobatsira vanhu vane HIV + kana vane AIDS kuti vawane rubatsiro nezvinodiwa zvavanoda.
Mune dzimwe nharaunda, isu tinoshanda nevashandi vezvehutano mune yeUrapa-Yezvemutemo Kubatana kupa zvizere mabasa uye kugadzirisa zviri pamutemo zvinodiwa nevarwere.
MABASA ETHU ANOSANGANISA:
Rubatsiro rwekurapa kuramba, kumisa, shandisa pasi nyaya (Medicaid, Medicare)
SSI / SSD kunyorera vanhu vanorarama neHIV-AIDS
Imba yevanamukoti inosunungurwa
Kuchengetwa kwemumba masevhisi
Kuchengetedza kwevanhu vakuru kuve nechokwadi chekuwana hutano
Masimba egweta uye mamwe mafambiro epamberi